Soomaaliya oo ka qeyb gashay Shirka 6-Aad ee Madasha Shacuubta Shiinaha iyo Afrika. - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Soomaaliya oo ka qeyb gashay Shirka 6-Aad ee Madasha Shacuubta Shiinaha iyo Afrika.
By admin November 19, 2021 11
Muqdisho (SONNA)-Danjire Cawaale Cali Kullane Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha ayaa khudbad dheer ka jeediyay shirka 6-aad ee Madasha shacuubta Shiinaha iyo Afrika.
Shirkan oo ka dhacay hoolka caanka ah ee Zhenghe Hall ee ku dhex yaalla Machadka Shiinaha iyo Afrika ee magaalada Beijing ayaa waxaa si wadajir ah usoo qabanqaabiyay Machadka Shiinaha iyo Afrika iyo Waaxda xariirka caalamiga ah ee Golaha Dhexe ee Xisbiga Shuuciga “IDCPC” ee talada haaya dalka Shiinaha
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dhankiisa warqad furan oo shirkan ku socotay oo hambalyo ah u diray shirka 6-aad ee Madasha Shucuubta Shiinaha.
Ethiopia on the brink as crisis threatens ‘peace and stability’ of region – but what has fueled the conflict and criticism of Biden’s response? – The Conversation US
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal oo bogaadiyay bilaabashada kuraasta Golaha Shacabka
Xubno ka tirsan argagaxisada Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Jamaame
Moqdisho oo ay maalintii labaad ka socoto kulanka Qaran ee xiriirinta Dawladdaha hoose+ ” Sawiro”